Raha misy mpizara nianjera noho ny hery tsotra tsy fahombiazana, ny orinasa iray manontolo mety ho nalemy sy tsy manan-tsiny ireo minitra vitsy ny outage mety Mitana fatiantoka ara-toekarena. Ny lehibe e-varotra orinasa no nitarika ny fomba ny fikarohana ny vahaolana ho olana manan-danja ity: Inona no hanampy antsika tsy mety diso antoka ny famatsiana angovo izay tsy dia manisy olana goavana tandindomin-doza ny habetsahan'ny angon-drakitra dia tokony hanao ny asany.
Tsy mahagaga noho izany, fa ny lehibe e-varotra iraisam-pirenena ireo orinasa no tena sahirana amin'ny famatsiana fitaovam-piadiana mahery vaika mpamokatra mba hahafahany mametraka manana fahefana maika famatsiana izay tsy mety aoka izy ireo teo amin'ny zava-nitranga ny zavatra samy hafa rehetra Grid tsy fahombiazana, na dia lavitra toy izany Mety ho ny mety. Ny hery tsy maintsy hijanona eo!
Ny taranaka angovo orinasa dia mifanaraka ny tenany ho ny idiosyncrasies ireo fametrahana amin'ny gropy milentika izay natao manokana ho an'ny Data Foibe ary salantsalany araka ny DCP (Data Center Power) fanambarana ny hery, ary izay manaraka ny fitsipika mifehy azy ireo. Ny Uptime Institute no eken'ny iraisam-pirenena izay mamaritra vatana sy manamarina ny fomba fametrahana ny Data Center tokony natao.
AGG Power efa mpisava lalana teknolojia izay mbola hamaritra ny tsara sy azo itokisana manerantany. AGG 'gazoaly gropy' tsy tontan'ny ela fahafahana hanatratra 100% entana fanekena amin'ny tsara indrindra-in-kilasy fanaraha-maso, angona foibe mpanjifa Afaka matoky izy ireo rafitra taranaka fahefa-mividy amin'ny nitarika amoron'ny azo itokisana sy azo itokisana.